Inkukhu cutlets ushizi uphayinaphu - namanzi kanye ithenda isidlo
Bangaki izitsha kungenziwa kuphekwe inkukhu? Zonke izindlela kukhona abaningi. Ukuze zokupheka zisebenzisa lonke inkukhu noma izingxenye. Leyo naleyo ngxenye isidumbu e akhe khe sizakala! Futhi has abalandeli bayo. Kodwa chops kangcono inkukhu webele. Abaningi bangase bathi le ngxenye inkukhu Kuthi ukuthungwa ezomile. Ungakwazi phikisana. Vele kudingeka nikwazi ukupheka kahle. Inkukhu cutlets ushizi uphayinaphu - kungcono omunye zokupheka best for esiphundu, ithenda kanye inyama namanzi.
Inkukhu kanye uphayinaphu - inhlanganisela ephelele
Lokhu dish has a elikhuhluziwe, ukunambitheka ukuqhuma imizwelo futhi piquancy ukukhanya. Inkukhu cutlets ushizi uphayinaphu namanzi etholwe ekuqedeni imikhiqizo inhlanganisela ayahambelana komunye nomunye futhi elihlale flavour. Lena iresiphi yasekuqaleni ukuba ube ngukukhanya e ikhalori yabo izitsha. Shono inkukhu - kuyinto umkhiqizo wezokudla. Ukuze wenze lokhu wobuciko Culinary kudingeka ezintathu inkukhu nezibopho ezincane (kangcono ukuthatha fresh noma chilled), usawoti, pepper, amagremu 100 of ushizi, ezintathu clove sikagalikhi kanye amasongo ambalwa uphayinaphu (ekheniwe). Inyama ageze futhi asule kubo ithawula ephepheni. Khona-ke kumelwe libe beat kancane off, zihambisana ukugoqa plastic. Asikho isidingo ukwenza okuningi umzamo, ngoba inkukhu ngesisa kakhulu. Ngemva kwalokho ufafaze nezibopho ngosawoti kanye pepper. Beka inyama eligcotshisiwekuhovini baking sheet. Advance kulungele kuhhavini 170 degrees. Ngesikhathi maphakathi ngamunye ucezu baba nesweli oqoshiwe. Lo mkhiqizo akufanele isetshenziswe inqwaba. Kufanele ungeze touch of ukunambitheka, kodwa engeke ashintshe ukunambitheka. Khona-ke wabeka ngamunye Chop uphayinaphu indandatho. Ngaphezu kwalokho imayonnaise Athambisa kubo futhi ivale nocezu ezondile ushizi okuyinto ezincane kuno Chop. Beka pan kuhhavini futhi upheke isigamu sehora. Inkukhu cutlets ushizi uphayinaphu etholakala namanzi futhi enhle. Ushizi lisakazeka namafomu uqweqwe kuphekeke.
Ungashintsha iresiphi bese usebenzisa Batter ehlanganisa amaqanda nosawoti. Lokhu kuzokwenza inyama amnandi ngaphezulu. Ngokuba ukulungiswa uzodinga ikhilogremu inkukhu, uphayinaphu okusemathinini Bank (iringi), 200 amagremu of ushizi, 2 amaqanda inkukhu kanye nezinongo. Thina siqale ukulungiswa umkhiqizo main. Ukuze inkukhu cutlets ushizi uphayinaphu waphenduka ithenda, kumele asikwe futhi kancane beat off. Khona-ke ufafaze umucu izinongo (pepper kanye nosawoti). Sebenzisa ezinye seasonings kungaba, kodwa ukuze musa ukuphazamisa ako main futhi flavour. Endishini ehlukile, beat amaqanda nge ingcosana kancane usawoti. Qoba inkukhu bacwilisa in Batter kanye gazinga ohlangothini pan ngamunye. Sabe uwafake bhaka. Phezu ucezu ngalunye lufakwa uphayinaphu indandatho afafaze ushizi. Sizothumela pan kuhhavini. Ungadliwa inkukhu cutlets kuhhavini ezahlukene isivinini ukupheka.
Inkukhu umucu zingafakwa ku marinade sokuwunikeza ngesisa nakakhulu. Ukuze marinade usebenzisa ngesipuni enkulu ukhilimu omuncu futhi kancane lwesinaphi. Beka lisikiwe ku le ngxube futhi ushiye imizuzu 30. Kodwa izingcezu lokuqala inyama kufanele ngobumnene beat off ufafaze izinongo. Umshini uzodinga ifomu nge-abarimi encane. Athambisa ibhotela wakhe. Lokhu kuyokunika isidlo ukunambitheka engavamile. Khona-ke chops walala eduze ngangokunokwenzeka komunye nomunye. Ngaphezu kwalokho kukhona izingcezu uphayinaphu. Ungasebenzisa izithelo oqoshiwe. I isiraphu kufanele kube ukukhanya, ngakho-ke isidlo Kuyophumela ethubeni eziphelele, hhayi amnandi kakhulu. Sicela ucabangele lokhu lapho uthenga. Engeza amanye ukhari ngoba ukunambitheka ufafaze ushizi, vukuza usebenzisa grater. Ukupheka chops inkukhu kuhhavini imizuzu 30-40.
Inkukhu chops utamatisi
Kuyinto eqotho futhi esephethe isidlo esihlwabusayo, kodwa kulula kakhulu ukulungiselela. Thatha 2 inkukhu nezibopho, utamatisi ezimbili, 150 amagremu of ushizi durum, amaqanda 2, ezintathu wezipuni kafulawa, isipuni esigcwele lwesinaphi, amafutha kanye nezinongo. Nezibopho uthathe izingxenye ezimbili, ngakho wabona ukuthi kwakungekhona okwakhe obukhulu. Khona-ke ngobumnene ziyakwenyanyisa ke, ufafaze usawoti kanye pepper kanye lwesinaphi yaphahlekwa. Shiya inyama ukuba marinate 30 amaminithi. Utamatisi uthathe imibuthano obukhulu, futhi abathathu ushizi usebenzisa grater. Endaweni ehlukile, ukulungiselela Batter. Hlanganisa amaqanda, ufulawa, usawoti kanye pepper. Chops bacwilisa kule ngxube brown epanini ukuthosa. Ekugcineni sibeka nocezu utamatisi phezu ufafaze ushizi. ikhava Pan ngesivalo angu-10. Inkukhu chops nge utamatisi out namanzi kakhulu. Ungase futhi upheke nabo kuhhavini.
Amazambane Baked - okunye okukhulu ecubuziwe amazambane
Apple Uphaya apula in multivarka: iresiphi ikhekhe okumnandi futhi okuphuma phambili
Pie Ossetic namazambane noshizi: iresiphi. pie Ossetic nge imifino. Ossetic ophaya ofakwe
Yini wena bhala uzicabange qhuba
Salad Kucheryavets Odessa: ubuchwepheshe ewusizo zasemazweni zikhula
The Dome Cathedral (Tallinn): Ukukhangana main yenhloko-dolobha Estonia
Izimiso civil umthetho imisebenzi
The main ingxenye Makarov isibhamu Imisebenzi
Indlela ukufihla isicelo ku Android: Three Easy Ways
Iziphequluli eziphezulu ezingu-10 zamakhompyutha